Muqdisho, 05, Oct, 2012…Waxaa maanta shir isugu yimid Gudigii wasiiro ah oo Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali u magaacabay kasoo talo bixinta iyo isku duba ridka gar-gaarka la gaarsiinayo dadka ku waxyeeloobay fatahaaddii ka dhacday magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan, wuxuuna Gudigu maanta kulan la qaatay in ka badan 20 Hay'adood oo isugu jira kuwa caalami ah iyo kuwo ka shaqeeya dalka gudihiisa.
Waxaana kulanka shir gudoomiynayay Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ahnaGudoomiyaha Gudiga loo xilsaaray arrimaha gargaarka bini'aadannimo ee Beledweyn, in kastoo uu goob joog ka ahaa Reysul wasaare ku xigeenka ahna Wasiirka Beeraha iyo Xanaanada Xoolaha. waxayna Gudiga iyo Hay’aduhu ka wada hadleen sidii gargaar deg deg ah loo gaarsiin lahaa dadkii ku wax yeeloobay fatahaadii Webiga Shabelle ee Magaalada Beledweyn.
Mas'uuliyiintii ka soo qeybgashay kulanka ayaa sheegay in qaarkood ay ku leeyhiin xafiisyo magaalada Baladweyn ayna ku diyaariyeen Muqdisho mucaawanooyin kala gadisan, loona baahan yahay in la mideeyo dadaalada la doonayo in lagu samata bixiyo dadka ku wax yeeloobay masiibada ka dhacday Baladweyn, waxayna masuuliyiintii isugu timid shirka isku afgarteen in maalinta Isniinta ah ay Hay'ad waliba soo diyaariso waxa ay ku taakuleyn karto dadkaasi. Iyadoona loo marinayo Gar-gaarka Hay'adda Maareynta Masiibooyinka ee dowladda Soomaaliya. Kulanka kadib ayaa warbaahinta la hadlay Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga C/laahi Goodax Barre. Wuxuuna warbaahinta u sheegay in dowladda iyo Hay'adahii kale ee ka soo qeybgalay shirkii maanta isku afgarteen iney sida ugu dhaqsiyaha badan u gaarsiiyaan gar-gaarkii ay ugu talagaleen dadka ku cayrtoobay fatahaada waxana ka mid ah waxyaalaha ilaa iyo iminka lagu yaboohay Raashin noocyo kala duwan ah , Dhar, Maro-Kaneecooyin, Daawooyin, Maacuuta wax alagu karsada, Cunooyinka lagu Nafaqeeyo Caruurta, iyo in loo dhiso Musqulo dadka barakacay.